39 Responses to “Many Bamas are swallowing the hook, line, and sinker”
March 6, 2021 at 2:55 am | Reply
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်လှပါသည် ….တို့ islam virus တို့ လို စာအုပ်မျိုးတွေ ကို စာစဉ် နံပါတ်တပ်ပြီး ဖောဖောသီသီ ထုတ်တယ် ….
မွတ်စလင်ဆိုင်မှာ စျေးမဝယ်ဖို့ စီးပွါးမလုပ်ဖို့ …အစီအစဉ်တကျ လုပ်တယ် …..သူတို့ မွေးထားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ထုတ်သုံးတယ် …..ပညာအခြေခံ အားနည်းတဲ့သူတွေ တော်တော်များများ နားယောင် သွားကြတယ် ….ပညာတတ်တွေလဲ ပါပါ တယ် ……
အဲ့လိုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ….အခု တော့ …..social p: ဆိုပြီး မိသားစုပုံတွေ သားသမီးပုံတွေ နဲ့ တင်ပြီး ….ပက်ပက်စက်စက် အပြစ်ပေးနေကြပြီ …..ဘာသာစုံ လူမျိုးစုံ က နေ မြန်မာ လူအသိုင်းအဝန်း….သာမက ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝန်းမှာပါ အရှက်တကွဲ ဖြစ်အောင် လုပ်နေကြပြီ …..
ဘယ်သူ့ကို မှ ဘယ်လောက်အင်အားနည်းနည်း …..ဘယ်လို အဆင်းနဲ့ လူပဲဖြစ် နေပါစေ …..မတရား တော့ သွားမလုပ်မိစေနဲ့ …..
ဝဋ်လည် တာ တအားမြန်တယ် ဘဝမကူး ဖူး …..
ဝဋ် လည်တာ တအားမြန်တယ် ….
August 14, 2021 at 10:02 am | Reply
ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည် တစ်လွှား မှာ မျိုးချစ်စိတ်တွေ နိုးကြားလာကြတယ်။ အချို့ က လဲ ကန်းကန်း ရိုင်းရိုင်း။ အချို့ ကလဲ ချင့်ချင့် ချိန်ချိန်။ အမျိုးသားရေးဝါဒ ရဲ့ အလံတွေ လဲ လွှင့်ထူလာကြတာ တွေ ရတယ်။ ၈၈၈၈ အုပ်စု က တောင် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဆို တဲ့ အကွက် ကို နင်း လာရင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေခံ ကို တည်ဆောက်လာတာ ကို တွေ့ ရပါတယ်။
ကိုလိုနီ အောက် က ရုန်းထလွတ်မြောက်လာ ရတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု တွေ ကို အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အစပြု ခဲ့ လို့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ဟာ တခြား ကိုလိုနီ နိုင်ငံတွေ လို ပဲ အားကောင်းမောင်သန် ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ အတိတ်ရှိတာ တော့ မဆန်ပေဘူး။ ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့ ပြော ရမယ်။ နယ်ချဲ့ တွေ ကို မုန်းတဲ့ စိတ် နဲ့ မြန်မာပြည် တစ်လွှား မှာ မျိုးချစ်စိတ်တွေ နိုးကြားခဲ့ ကြလို့ ပဲ။ အသက်သွေးတွေ ပေးခဲ တယ် တိုင်းပြည်ထူထောင်ခဲ့ ကြတယ်။ ဒီရှုထောင့် က ကြည့် ရင် လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာပြည် ဟာ အမျိုးသားရေးဝါဒ က မွေးဖွားပေးခဲ့ တာ လို့ ပြော ရမလို တောင် ဖြစ်တယ်။
အခုလဲ ရခိုင် အရေး ကို အခြေတည် ပြီး အတိတ် ရဲ့ အရိပ်တွေ ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းချင်ပုံ ရပါတယ်။ နေရာတိုင်း မှာ စစ်သွေးစစ်သံ တွေ က တစ်ညံညံ ဝေ လို ပဲ။ ကိုယ်စီးမဲ့ မြင်း ကို အထီး အမ ခွဲ ခြား တတ်ကြဖို့ တော့ လို လိမ့် မယ်။
မေးခွန်း က အမျိုးသားရေးဝါဒ လို မလို မဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသားရေးဝါဒ က နိုင်ငံ တစ်ခု ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ် ဖြစ်လို့ ပဲ။ တစ်နည်း အား ဖြင့် နိုင်ငံတစ်ခု ရဲ့ အတ္တ နိုင်ငံတစ်ခု ရဲ့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ပါပဲ။ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို အခြေခံ သော လစ်ဘရယ် ဒီမို ကရေစီ ကို ဖေါ်ဆောင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာ ပြောချင်တာ က တော့ ဒီ နှစ်ခု လုံး က တန်းတူ အရေးကြီးတယ် ဆို တာ ကို သိမှတ်ထားဖို့ တော့ လို တယ်။ တစ်ခု အတွက် တစ်ခု ကို စတေး ပစ်ရမှာ မဟုတ် ပဲ ဒီ ၂ ခု (အမျိုးသားရေးဝါဒ နဲ့ ဒီမိုကရေစီ) ကို ဟန်ချက်ညီ အောင် ကျင့်သုံးကြ ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ကြမလဲ။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ကြမယ် ဆို ရင် တော့ အလွန် အန္တရာယ်ကြီးမားပြီး ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ ဘာသာကြီးဝါဒ ဆီ ကို ဦးတည်သွား မှာ အသေ အချာ။ ဒီလို လှုပ်ရှားမှု တွေ ကို ဦးဆောင် သူ တွေ ဟာ အစွန်းရောက် ရက်စက် လူမဆန်တဲ့ အာဏာရှင်တွေ အဖြစ် နိဂုံးချုပ် ရတာ ချည်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ဟစ်တလာအစ ဟူစိန်အလယ် ကဒါဖီ အဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေ ဟာ အမျိုးသားရေးဝါဒ နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ သူတွေ ဆို တာ သတိရကြပါ။
တစ်နေ့ က သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းသေတမ်းစာ ဆို တာ ဖတ်ရတယ်။ အချုပ်ပြောရ ရင် အလွန် အန္တရာယ်ကြီးမားပြီး ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ ဘာသာကြီးဝါဒ ကို သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ရဲ့ ပါးစပ် မှာ တပ် ပြီး ပြော ခိုင်း ထား တာ ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဆရာကြီးလို ငြိမ်းချမ်းရေး မြတ်နိုးသူ က သေခါနီး မှာ ဒါမျိုးပြောခဲ့ တယ် ဆို ရင် တောင် သူငယ်ပြန်တာ ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက် က ဒါ ကို ဖန်တီးခဲ့ တယ် ဆို လဲ အဲဒီသူ ဟာ The Enemy of the State ပါပဲ။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ကြမယ် ဆို ရင် လူများစု ဗမာ တွေ ရဲ့ လူမျိုး ဘာသာစကား နဲ့ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အခြေခံ ပြီး ဖွင့် ကြမှာ လား။ ဒီလို ဆို ရင် တော့ မြန်မာပြည် ရဲ့ အနာဂတ် နေ့ ရက် တွေ က မငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ ပါ။ ပြည်တွင်းစစ်မီးလျှံ တွေ ဆီ ကို ပဲ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ က တွန်းပို့ လိမ့် ဦးမယ်။ မြန်မာပြည် က အခြားသော လူမျိုး အခြားသော ဘာသာစကား နဲ့ အခြားသော သာသနာတွေ လဲ အားကောင်းကောင်း တည်ရှိ နေလို့ ပါပဲ။ တူ ဖြစ်တုန်း ကိုယ် က ထု ရက် ရင် ပေ ဖြစ်တဲ့ အလှည့် ကျ လဲ ကိုယ် က ခံ ရလိမ့်မယ်။
ခါတော်မီ နိုင်ငံရေး အင်အားစု တွေ က အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ကိုင်စွဲ လာ ကြ ရတာ ဘာကြောင့် လဲ။ ဆောင်းပါရှင် ပြော သလို (( အမှန်တကယ်တွင်တော့ ပြည်သူလူထုကို လှု ံ့ဆော် မောင်းတင်ပေးနိုင်သော စိတ်ဓါတ်မှာ ဤ အမျိုးသားရေးဝါဒသာဖြစ်၍…)) ဆိုတာကြောင့် ပညာမတတ် ဆင်းရဲတွင်းထဲ နစ်နေတဲ့ လူထုကြီး ကို စေစား ကိုင်တွယ် အသုံးချ ချင် လို့ ပါပဲ။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ဟာ တတိယကမ္ဘာ နိုင်ငံ တွေ မှာ စျေး ပေါပေါ နဲ့ ရ နိုင်တဲ့ လူထု စည်းရုံးရေး အိုင်ဒီယိုလိုဂျီ လက်နက် ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။ သွေးဆူလွယ်တဲ့ လူအုပ်နိုင်ငံရေး Mobocracy ဖက် ကို တိမ်းညွှတ်သွား နိုင်ပါတယ်။ လူတွေ ကို အလွယ်စည်းရုံး နိုင်တဲ့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ဟာ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး တွေ အများကြီး ရှိ နေတာ သိသင့် ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ကို အသက်ပေး ကာကွယ် သူ တွေ က ကာကွယ် ပြည်ထောင်စု ရဲ့ အကျိုးအမြတ် ကို ခူးခပ် စားသူ က ခူးခပ်စား နဲ့ င အ တွေ မို့ သာ ဒီ အမိုက်လှိုင်း ကြီးထဲ မှာ သံယောင် လိုက် ကြ ရတာလေ..။ ခုထိ သင်ခန်းစာ မရ တတ် ကြသေးဘူး လား နောင်တ မရတတ် ကြသေးဘူးလား လို့ ဧရာ၀တီ နဲ့ ရိုးမ တောင်တန်းကြီးတွေ သိမ့်သိမ့်တုန်ဟီး သွားအောင် တောင် ဟစ်ကြွေး လိုက် ချင်ပါရဲ့။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ရှေ့တန်းတင်လာ ခြင်း ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား တွေ အချင်းချင်း စိတ်၀မ်းကွဲစေမဲ့ သံသယ မျိုးစေ့တွေ ကို စိုက်ပျိုးပေးမဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူဝါဒ ပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ က ဘာလဲ။
မှန်ကန်တဲ့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ဆိုတာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကို အခြေမခံ ပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ကို အခြေခံတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ (တနည်း နိုင်ငံချစ် ဝါဒ ) ပဲ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံ တစ်ခု မှာ နယ်နမိတ်အကျယ်အ၀န်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ နဲ့ နိုင်ငံသား တွေ ပါ၀င် ပါတယ်။ ပထဝီနယ်နမိတ်အကျယ်အ၀န်း တစ်ခု အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အောက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ထိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း ဟာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ မခွဲခြားပဲ မိမိ နိုင်ငံတော် ကို ချစ်တာ ကာကွယ်တာ အကျိုးဆောင်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ပါပဲ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ကို အခြေခံတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ရှိမှ တကယ် ပွင့်လင်းလွတ်လပ် တဲ့ တရားမျှတမှု ဆို တာ ရှိမယ်။
တကယ် ပွင့်လင်းလွတ်လပ် တဲ့ တရားမျှတမှု ဆို တာ ရှိ မှ လဲ သံသယကင်း တဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဖြစ်မယ်။
သံသယကင်း တဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဖြစ်မှ လဲ တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။
လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အနှစ်သာရ ကလဲ မတူကွဲပြား ခြားနားမှုတွေ လွတ်လပ်စွာ အတူတည်ရှိ်နိုင်ခြင်းပဲ မဟုတ်ပါလား။
လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အနှစ်သာရ က လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပင်ကိုယ်တန်ဖိုး နဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပင်ကိုယ်တန်ဖိုး နဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ကို ဘယ်လို စကားလုံးကြီးတွေ အတွက် မှ မစတေး သင့်ဘူး ဆို တဲ့ အမြင် ပါပဲ။
ဒါကြောင့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အလံ မြင့်မြင့်လွှင့်ထူပြီး အယာတိုလာ တစ်ယောက် ရဲ့ သံမဏိအကျဉ်းထောင်ထဲ မှာ နေလို ကြရင် တော့ လဲ ဒါက ဗမာ တွေ ရဲ့ ရွေးချယ်မှု လို့ ပဲ ဆို ရမယ်။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အသာစီး ရမှု က လူတစ်ဦးချင်းစီ ရဲ့ လွတ်လပ်မှု နဲ့ တန်ဖိုးထက် အရေးကြီးတယ် ဆို ရင် လဲ ဒါက ဗမာ တွေ ရဲ့ ရွေးချယ်မှု လို့ ပဲ ဆို ရမယ်။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အိပ်မက်ဆိုးကြီး မှ အမိပြည်ပြန်မာ အမြန်ဆုံး နိုးထလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ။
October 15, 2021 at 4:09 am | Reply
“ကျော်တို့ မိသားစုအတွင်းမှာ နိုင်ငံခြားသား
သွေးနှောတာ တစ်ယောက်မှ မပါဘူးဗျ ဟင်း ဟင်း”
“အဲ့ဒီတော့ အမျိုးသန့်တာပေါ့ ဦးလေးရယ်”
“အမျိုးသန့်တော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် စိတ်ချရတာပေါ့ဗျ”
“မင်း ဒေဝဒတ် ကို သိလား”
“အင်း သိတယ်လေ … သာသနာဖျက်”
“အဲ့ဒီ ဒေဝဒတ်က ဘယ်သာသနာကိုဖျက်တာလဲ”
“သာကီဝင် ပဲ မဟုတ်ဘူးလား”
“အဲ … ”
“ပြောလေကွာ … စကားမပြောတတ်ဘူးလား”
“ဟာဗျာ .. ”
“အမျိုးက သန့်တာမှ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ယောက်ဖ”
“မြတ်စွာဘုရား ဦးလေးရဲ့ သား”
“ဘုရားနဲ့ ညီအကို ဝမ်းကွဲကွာ”
“ဟာဗျာ .. အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဗျာ”
“ရှင်မောဂ္ဂလန်နဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ကိုယ်တော်ကြီး နှစ်ပါးကို လက်ဝဲ လက်ယာရံ တွေ မြတ်စွာဘုရားက ခန့်အပ်တယ်မဟုတ်လား”
“အဲ့ဒီအချိန်မှာ မင်းမျိုးကို မခန့်ပဲ ပုဏ္ဏားမျိုးကို ခန့်ရမလားဆိုပြီး ထပြဿနာရှာတာ ဒေဝဒတ်ပဲ”
“ဪ … ”
“ပြဿနာရှာတာမှ သံဃာထုကို သူ့လက်ထဲအပ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားကို အေးအေးဆေးဆေး နေပါဆိုပြီး အာဏာသိမ်းသလို ထ လုပ်တာ”
“ပြန်ပြောစမ်းပါဦး ဒေဝဒတ်က အမျိုးမသန့်ဘူးလား”
“သန့်တယ်လေ … ”
“အဲ့ဒီလို သန့်တဲ့ ကိုမျိုးသန့်ကြီး ဘာဖြစ်သွားလဲ”
“အဲ့ဒီတော့ အမျိုးမာန်တက်ပြီး မျိုးသန့်တယ်လို့
“ဘာဖြစ်မှာလဲဟင် … ”
“သာသနာဖျက် ဖြစ်မှာပေါ့ ငါတို့အမသားလေးရယ်”
“ပြောသာပြောရတာပါကွာ … မင်းတို့ကိုမျိုးသန့်တွေ
November 21, 2021 at 12:48 pm | Reply
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် (၃) အပိုဒ်ခွဲ ၂
စကားချပ် ။ ။ ။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကျွန်တော် ရဲ့ဒီ အပိုဒ်ကိုယ် မဖတ်ခင် ကျွန်တော် တောင်းဆိုချင်တာက စာဖတ်သူအနေနှင့် အရှိကိုယ် အရှိအတိုင်း အမှန်ကိုယ် အမှန် အတိုင်း လက်ခံဖို့ နိုင်ဖို့ကိုယ်ကြိုတင်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။ ။
ဒီလိုနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေ ကျုပ်တို့ရဲ့မှိုင်းလုံးအောက်မှာ မျောသွားတာကိုယ်ကြည့်ပြီး ကျုပ်တို့တော်တော်လေး ကိုယ် စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေမိတာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့တစ်အုပ်လုပ်တဲ့ဂွင်က ကျုပ်တို့တစ်သိုက်တော်လိုတတ်လို့လဲမဟုတ်ဘူးဗျ ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာတွေကနှစ်ရှည်လများစွာဖန်တီးထားတဲ့ ဂွင်တစ်ခုလဲဖြစ်တာကိုယ် ကျုပ်ဒီမှာဝန်ခံပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်ဆရာ့ဆရာ တွေက သမိုင်းကျောင်းအကုန်လုံးကိုယ် ပိပိရိရိနဲ့ဖျောက်ထားခဲ့တယ် လေ ဒီမို ဒီမို လို့ပြည်သူပြည်သားတွေ တွန်းလှန်နေတာကိုယ် ပြတ်ပြတ်သားသား နိုမ့်နင်း နေသလို တစ်ဖက်ကနေလဲ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မူဆလင်မ်တွေ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပါဝင်ခဲ့တာကိုယ် နှောင်းလူတွေမျိုးဆက်သစ်တွေမသိအောင် ဖြေးဖြေးချင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့သလို ပြည်သူပြည်သားတွေ ကလဲသမိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလေ့လာအားအတော်နည်းတယ် နောက်ပြီး မူလတန်းကျောင်းကနေစလို့ ကျုပ်တို့ လုပ်ထားတဲ့ပညာရေးစနစ်က တော်တော်လေးကိုယ် အားနည်းအောင်လုပ်ထားခဲ့တာလဲကျုပ်တို့ရဲ့အကြံပါ တကယ် တော့ ကျုပ်တို့ကလုပ်တာဂွင်ဖန်တီးတာတစ်ခုဘဲရှိတယ် တော်လို့တတ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျ ပြည်သူပြည်သားတွေ လေ့လာအားနည်းတာရယ် အသုံးမကျတာတွေရယ် အကျင့်ပျက်ချစားအောင်ဖန်တီးထားတာတွေရယ် အမျိုးသားဝံသာနုစိတ်ဓါတ်လို့ပြောလိုက်တိုင်း ပြည်သူပြည်သားတွေ တန်းခနဲ့သိတာက လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကမြှောက်လိုက်တာနဲ့ရောပြီးပါသွားတတ်တယ်နောက်ပြီး ငါ့တို့ဘာသာကလွဲပြီးတစ်ခြားဘာသာတစ်ခုကိုယ် လေ့လာအားနည်းတတ်တာတွေက ကျုပ်တို့ဖန်တီးတဲ့ဂွင်နဲ့ကွက်တိဝင်သွားတာပေါ့ဗျာ တကယ်တော့ ပြည်သူပြည်သားတွေက ဟိုလူယောင်လိုပါ ဒီလူယောင်လို့ပါတဲ့သူတော်တော်များတယ်ဗျ ဟဲဟဲ ကျုပ်တို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးဗျ ပြည်သူပြည်သားတွေညံလို့ ခုလိုမျိုး ကျုပ်တို့နဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာ့ဆရာ ငရဲခွေးတစ်အုပ်နှစ်ရှည်လများစွာ အာဏာလွဲပြောင်းယူနေတာပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ ဒါနဲ့ဒီမှာကျုပ်ပြောနေရင်းနဲ့ ပြည်သူပြည်သားသိအောင် မွတ်ဆလင်မ် တို့ရဲ့သမိုင်းကိုယ် ဘာကြောင့်ဖျောက်လဲဆိုတာ ပြောပြရအုံးမယ် တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကျောင်းတစ်လျှောက်မှာ မြန်မာမူဆလင်မ်တွေက နေရာတော်တော်များများမှာ အခန်းတစ်ခုအနေနဲ့အခိုင်အမာရှိနေတယ် ဆိုတာ ကျုပ်တို့ဝန်ခံပါတယ် ဒီဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုယ် ညီညွတ်နေတာ ကိုယ် ကျုပ်တို့တစ်အုပ်လုံးလုံးမလိုလားတာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမြန်မာမွစ်ဆလင်မ်ဘာသာဝင်တွေက မဟုတ်ရင်မခံတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ် နောက်ပြီးသူတို့တစ်တွေက တွန်းလှန်လိုစိတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထက်မသာရင်တောင် အတူတူလောက်နီးနီးရှိတယ် ဗျ ဒါတွေကိုယ် ကျုပ်တို့မလိုလားဘူး ဘာလို့ကျုပ်တို့ အခိုင်အမာ ပြောရဲသလဲဆိုတော့ ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဘုရင် လက်ထက်ကထဲက မြန်မာမူဆလင်မ်တွေက နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့တဲ့ စစ်သူကြီးတွေရှိခဲ့သလို ကိုလိုနီလက်ကနေလွတ်ပြီး မြန်မာ့လွတ်လေးရေးရဖို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ လွတ်လပ်ရေးယူပေးဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးရာရှစ်လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဦးရာဇတ်နဲ့ သူရဲ့ သတ်တော်စောင့် ရဲဘော်ကိုထွေးလို အာဇာနည်သူရဲကောင်း တွေထုနဲထည်နဲ့ရှိတယ် ဗျ အဲ့ဒီသမိုင်းတွေက ဘယ်လိုမှဖျောက်လို့မရတဲ့ သမိုင်းတွေ သူတို့ရဲ့သမိုင်းတွေကိုယ် ခုခေတ်လူငယ်တော်တော်များများမသိအောင် ကျောင်းစာသင်ခန်းက ကျောင်းသင်ရိုးမှာ မထည့်လဲ ဟို ဦးပေါင်းကျားနဲ့မြင်းကျားရှင် လို တပ်မတော်က ကယ်တင်တဲ့ အိမ်စောင့်မစိုးရ လို အသုံးမတည့်တော့တဲ့ သင်ရိုးတွေထည့်ပြီး အဆင့်ဆင့်ကျုပ်တို့အာဏာမထိပါးစေဖို့အတွက် ဂွင်တွေဖန်တီးထားတယ် မပိုင်ဘူးလားဗျာ ကျုပ်တို့ရဲ့ကလိမ် ဥာဏ်က ။
ဆက်ပါအုံးမည် ။ ။ ။
November 23, 2021 at 5:39 am | Reply
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေမှာ
ဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာဟာ
တိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့ နိုင်ငံသားအဖြစ် ရရှိထားပြီးတဲ့
‘ကမန်’လူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုသတ်ဖြတ် ညှဉ်းဆဲပြီး
အစိုးရက သူတို့ကို ဘာအကာအကွယ်ပေးခဲ့သလဲ
‘မြန်မာမွတ်စလင်’ တွေ ‘မြေဒူး’ တွေဟာလဲ
အဲ့ဒီ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတဲ့ မွတ်စလင်တွေကို
အစိုးရက ဘယ်လိုအရေးယူခဲ့တယ် ဆိုတာ
ဘယ်နေရာ ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကများ ၈၂ နိုင်ငံသား
ဒီကနေ့ တိုင်းပြည်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ
ဗမာကလွဲရင် ဘယ်သူတွေများ တိုင်းရင်းသား
(ဗမာတွေတောင် စစ်တပ်နဲ့ မပတ်သက် မစပ်ရှက်ရင်
ပိုးစိုးပက်စက် အဖိနှိပ် အချုပ်ချယ်ခံနေရပါတယ်)
လူမျိုးရေး/ဘာသာရေး ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေ လုပ်နေလို့
ကိုသန်းလွင်ထွန်း ရေးထားတဲ့အထဲမှာ “ARSA ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဖွဲ့ပေါ်လာတယ်” လို့
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဖွဲ့လို့ ရေးလိုက်တာပါလဲ ကိုသန်းလွင်ထွန်း
ARSA ဟာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တဖွဲ့ပါ
လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ပေါင်း တရာကျော်
ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့
ရေးသမားခေါ်ခေါ် ကြိုက်သလို ခေါ်လို့ရပါတယ်
ARSA အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တာနဲ့ မွတ်စလင်
တွေဖြစ်တာနဲ့ပဲ “ဘာသာရေးအစွန်းရောက်” ဖြစ်သွား
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ခွဲခြားမှု အစွဲမကင်းတာကို
ARSA အဖွဲ့ရဲ့ ရပ်တည်ချက် ရည်မှန်းချက် ဆိုတာ
တွေက ရှုတ်ထွေးနေလို့ “လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့” တဖွဲ့
ဆိုတာရဲ့အပြင် ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက် ချလို့
အခု ICJ အသံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ တကြိမ်
ARSA အဖွဲ့ စတင်ပေါ်ပေါက်လာကထဲက
တိကျရေရာတဲ့ တော်လှန်ရေးတခုအဖြစ် မရှိခဲ့ပါဘူး
၂၀၁၆ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး
တွေ စံချိန်တင်ဖမ်းမိထားပြီး ဖမ်းဆည်းမိတဲ့ မူးယစ်
ဒီ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ရဲစခန်းတွေကို စီးနင်း
သိမ်းယူပြီး ရေကြောင်းလမ်းခရီးကနေ သယ်ယူသွား
ဖို့ အဖွဲ့တဖွဲ့က စီစဉ်ပါတယ်
အင်အားကြီးမား လက်တန်ရှည် တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့
(စစ်တပ်က တာဝန်ရှိသူအချို့ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်)
သူတို့ဟာ ရဲစခန်းထဲက မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို
အလုပ်သမားတွေကို နယ်စပ်က ရိုဟင်ဂျာတွေကို
လိုက်ပါလာကြပြီးတဲ့နောက် သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာသူတွေက ရဲစခန်းတွေကိုစီးနင်းပြီး မူးယစ်ဆေးတွေ
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေသာမက စခန်းထဲက လက်နက် တွေယူပြီး ပုန်ကန်ထကြွကြပါတယ်
အခြား ရဲစခန်းတွေကိုလဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး
DEA ကလဲ သတင်းတွေရသွားလို့
နယ်စပ်က ပိတ်ဆို့ စောင့်နေပါတယ်
နောက်ဆုံး ARSA ဖြစ်လာမဲ့သူတွေက
မူးယစ်ဆေးဝါး တွေကို တောထဲမှာစွန့်ပစ်သွားခဲ့
လာပြီး ရိုဟင်ဂျာ ၇သိန်းလောက် ဘင်္ဂလားကို
ဒီသတင်းတွေကို ပြသနာ စဖြစ်တဲ့အချိန်ကထဲက
ဆရာဦးကိုနီနဲ့ ဖုန်းဆက်သွယ်ပြီး နေ့စဉ်ရက်စက်
ဖြစ်ပျက်သမျှ အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက် ပြောပြခဲ့
ဆရာဦးကိုနီကလဲ အဖြစ်အပျက်တွေကို “အမကြီး” ထံကို နေ့စဉ်သတင်းပို့ခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်
တခါတရံ “အမကြီး” သိလိုတဲ့ အချက်အလက်များကို
ကျတော် အဓိကပြောချင်တာက ARSA အဖွဲ့
စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အသေးစိတ်ကို “အမကြီး” သိပါ
အဲ့ဒီတော့ ARSA အဖွဲ့ဆိုတာ
အလှူခံ မိုက်ကြေးခွဲစားသူတွေက ARSA အမည်ကို
အဲ့ဒါကြောင့် ARSA ကို
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဖွဲ့ လို့ ရေးသားလိုက်တာ
ဟာ ကိုသန်းလွင်ထွန်းရဲ့ အမှားကြီးပါ
နောက် ကိုသန်းလွင်ထွန်းက ရေးထားပါသေးတယ်
အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ် လို့
1982 ခုနှစ်မှာပြဌာန်းတဲ့ နိုင်ငံသားဥပဒေကြောင့်
1978 ခုနှစ်ကထဲက ရိုဟင်ဂျာတွေက ကြိုတင်ပြီး
ဟာ ဗမာစစ်တပ်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့
သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးချင်နေတဲ့ အစိုးရ ရဲ့
အကျိုးဆက်အဖြစ် ဒီကနေ့ ပြသနာတွေကို
ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်ကလဲ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးအမြင်
ဘယ်ပြသနာကိုမှ ပညာရှိရှိနဲ့ မဖြေရှင်းပဲ
အချိန်ဆွဲ လှည့်ဖြား ဖုံးအုပ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားခဲ့တာပါ
“အာနန်ကော်မရှင်” ကိုလည်း စိတ်ရင်းစေတနာ
ကောင်းနဲ့ လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး
ကမ္ဘာကိုလိမ်လည်ဖို့ အချိန်ဆွဲဖို့ လုပ်ခဲ့တာပါ
လုပ်ပြီးမှ ‘မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်လို့’ ပစ်ပယ်
ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိုယ်တိုင်က ၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့
စီစစ်တာကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောဘူးပါတယ်
မှန်မှန်ကန်ကန် စီစစ်ပေးဖို့ပဲ လိုတာပါ
ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ဘိုးဘွားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော်က
နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်သူတွေကို ထုတ်ပေးတဲ့ သုံးခေါက်
ချိုး အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကို ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြသူတွေ
အဲ့ဒီ သုံးခေါက်ချိုးမှတ်ပုံတင်တွေကို သိမ်းယူပြီး
လူအချို့ကိုပဲ “ဝှိုက်” ကဒ်တွေ ပြန်ပေးထားခဲ့တာပါ
NVC တွေ ပေးဖို့ လုပ်လာပြန်ပါတယ်
လက်တွေ့ကတော့ ဥပဒေမဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး
၈၂နိုင်ငံသားဥပဒေထဲမှာ NVC ထုတ်ပေးဖို့အချက်
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်း(သမ္မတ ကနေ သူဒေါင်းစားအထိ) စစ်ရဲသလား
ကျနော်တို့က မျိုးရိုးဇာတိ အဘိုးအဖွားကအစ
နိုင်ငံသားတဝက်လောက် ဧည့်နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ကုန်
“တဖက်ကလဲ မတရားစွတ်စွဲတာတွေနဲ့ ပုံကြီးချဲ့ပြီး
ဒီပြသနာကို မတရားစွတ်စွဲမှုတွေနဲ့ ပုံကြီးချဲ့သွားတာ
လုပ်သွားတာက စစ်တပ်ရယ် အစိုးရရယ် မျိုးညစ်
ကိုသန်းလွင်ထွန်းတို့ လို မီဒီယာတွေပါ ပါပါတယ်
Victim Blaming မလုပ်ပါနဲ့
နေတဲ့သူ တယောက်မှ မပါ ပါဘူး
သူတို့ရဲ ရိုးသားမှု သူတို့ရဲ့ ကျိုးစားမှုတွေကို
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလို့
တခါ ဖြာထွက်လာတာကို မြင်တတ်အောင် ကြည့်ပါ
ရခိုင်ပြည်သူတွေအကြားမှာ မျိုးဆက်တခုလုံး လူလုံးမလှ ဖြစ်ရရင် အဲ့ဒီအဖြစ်ကို ဂျီနိုဆိုဒ်လို့ခေါ်ပြီး
ရိုအရေးလှုတ်ရှားသူတွေအပြစ် လို့တော့ မပြောပါနဲ့
စစ်တပ်နဲ့ သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့အစိုးရ
အပါအဝင် အစွန်းရောက် ဗမာတချို့နဲ့ အစွန်းရောက်
ရခိုင်တချို့ဆိုတာကို ကမ္ဘာက မှတ်တမ်းတင်ထား
ကျနော် ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်ပါ
အောက်ပါ Link တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်
December 10, 2021 at 5:41 am | Reply
Congratulations Ma Ba Tha Ultra-nationalist monks for successfully spreading or reviving or Renaissance of the Racist Bigot Nationalism.
Now Britain’s “British First” racist slogan had won the Brexist.
Trump has won the US Election on your Racist Platform.
India’s Modi and Netanyahu became PM on the same platform you shared. As Indian Hindu and Zionist Racists are your teachers in Islamophobia, you could be still proud of your teachers.
I am amazed when you condemn some Malaysian politicians when they use your idea.
Be careful Ms Mary Robinson, High Commissioner for Human Rights (1997-2002) had warned the racists, “If we discriminate others as foreign because they, their race and religion are different to us, all the others could also look down and discriminate on us because we are also foreign to them!”
Look back the history as history tend to repeat it self. Buddha was born in Nepal which was part of India but now Buddhism fails in those area but spread or flourish in other countries. Now Ma Ba Tha’s animosity on others is spread to other numerous countries and their hatred on others (for them Buddhists) have grew tremendously especially in Islamic countries and some democratic fair minded Christian countries who value the democracy, human right and justice who actually never hate the Buddhists but the racist criminal Myanmar Military and their protector Daw Suu led NLD.
But Myanmar Ma Ba Tha had failed inside Myanmar like the failure of Buddhism in India-Nepal. Although you were set up, sponsored and protected by Myanmar Generals you failed to help Military backed USDP. You would still fail again in coming By-election.
But in the here after you all would definitely rule the hell together with Myanmar Military and Racist Rakhines. Don’t worry Hitler, Mussolini, Fascist Japan Generals, General Ne Win etc are going to heldahuge welcoming ceremony when you enter hell.
December 20, 2021 at 3:03 am | Reply
အခု NUG ဘဝမှာတော့ ပြောင်းပြန်
သင်တို့ ဘာလို့ ခုအချိန်ထိ စောင့်နေ
ဘာ ဘာ ညာ ညာ တွေနဲ့ အကူအညီပေးပါလို့အော်ပြနေတယ်
ရိုတွေ ခံနေရတုန်းက NLD က ကုလအရာရှိတွေဗီဇာမပးတာတွေ၊ စုံစမ်း
စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေဝင်ခွင့်မပေးတာတွေ၊ ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ရိုတွေကို NLD
မလုပ်ခဲ့တာကို ကမ္ဘာကြီးက မေ့သွားပြီထင်နေကြပါသလား။
အဲ့ဒီတုန်းက ဂျင်နိုဆိုက်ကျူးလွန်ထားသူအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးခုအချိန်ထိ လူနည်းစုအရေး တိကျသေချာတဲ့ မူဝါဒ မချပြသေးတဲ့ NUG
ကို ယုံကြည်ရလောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်အနောက်ကမ္ဘာက သတ်မှတ်လိမ့်မယ် ထင်ပါသလား။
လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ မူဝါဒရေးရာ
ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်မှု့မလုပ်သ၍ ၊
ရို ဂျင်နိုဆိုက်မှု့မှ တရားခံများကို
NUG ကိုအနောက်ကမ္ဘာက လက်ခံဖို့မရှိပါဘူး။
February 19, 2022 at 1:27 pm | Reply
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွစ်ဆလင်မ်မုန်းတီးရေးဝါဒဖြန့်ချီချက်တွေရဲ့ ဗဟိုဟာ စစ်တပ် ။ စစ်တပ်က စစ်သားတိုင်းလည်း ဒါမျိုးမလုပ်တတ် ။ စစ်သားစာရေးဆရာတွေအားလုံးတောင် ဒီလိုဝါဒဖြန့်တာတွေကို မလုပ်တတ် / မလုပ်ရဲ / တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းပဲ သီးသန့်ရေးတဲ့ လိုင်းကသူတွေ မလုပ်ကြ ။ ခင်ညွန့်ဖွဲ့သွားတဲ့ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဌာနကတော့ မွစ်ဆလင်မုန်းတီးရေးစာတမ်းတွေတင်ခိုင်းတာ / ဖြန့်ဝေတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ။
ခင်ညွန်လွန်တော့ အဲ့ဒီလေ့လာရေးဌာနပျက်သလိုဖြစ်သွား ။ ဒါပေမဲ့ စစ်ရုံးကြီးလက်အောက်မှာ သုတေသနဌာနတွေ ဆက်ဖွင့်တယ် ။ အဲ့ဒီထဲကနေ မွစ်ဆလင်မ်မုန်းတီးရေးသုတေသနစာတမ်းတွေ ဆက်ထွက်တယ် ။ နအဖခေတ်မှာတော့ ဒီစာတမ်းတွေကို တပ်ထဲမှာတောင် ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်မဟာဝိဇ္ဇာတန်းတက်မှ ဖတ်ကြရတယ် ။ ဒီစာတမ်းတွေဟာ အပြင်မှာဆို အန္တရာယ်ရှိတယ် ။
တခါက အဲ့လိုစာတမ်းကို စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်လိုက်တာ ပါကစ္စတန်သံရုံးက ကန့်ကွက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ရောပဲ ။ ” တကမ္ဘာလုံးက အကြမ်းဖက်တွေဟာ ပါကစ္စတန်မှာ အခြေစိုက်ပါတယ် / ပါကစ္စတန်ဟာ အကြမ်းဖက်နိုင်ငံပါ / မြန်မာနိုင်ငံလည်း အတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တယ် ” ဆိုတာမျိုးတွေ မရမကဇွတ်ချိတ်ရေးထားတဲ့ စာတမ်းပေါ့ ။ အဲ့လိုဗရမ်းဗတာစာအုပ်မျိုးရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အခု စစ်အစိုးရလက်ထက် ဝန်ကြီးတက်လုပ်နေတဲ့ ဦးကိုကိုလှိုင်ဆိုတဲ့ ဘိုးတော်ပဲ ။ လောလောဆယ် မြန်မာစစ်သားတွေပါကစ္စတန်မှာ စစ်သင်တန်းတက်နေတာတွေ ပါကစ္စတန်စစ်ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က ဝယ်ယူသုံးစွဲနေတာကိုကြည့်ရင် သူရေးခဲ့တာတွေက လက်တွေ့နဲ့ဘယ်လောက်ဝေးကွာလဲ မြင်နိုင်မှာပါ ။ လုံးဝ တောင်ထိပ်နဲ့ မြောက်ထိပ်ကွာတာတွေရေးခဲ့သူ ။
၂၀၁၁ သိန်းစိန်အစိုးရတက်လာတော့ တကမ္ဘာလုံးက ချီးပနေချိန် သူက အစိုးရအကြံပေးပေါ့ ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သူနဲ့အင်တာဗျူးတခုကို မြဝတီကလွှင့်တယ် ။ အင်တာဗျူးမှာ သူဇွတ်တင်နေတာက ” တပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရွေ့ဟာ အင်မတန်လှပကြောင်း / အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရဗ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရွေ့ဟာ အစ္စလာမ်းမစ်အစွန်းရောက်တွေကြောင့် ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ဖြစ်နေရကြောင်း ” ပေါ့ ။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အာရဗ်နွေဦးတော်လှန်ရေးဆိုပီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသပြည်တွင်းစစ်တွေ စတင်ခါစ ။ ဒီလူက ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အစ္စလာမ်းမစ်တွေဘာပြုတယ် ညာပြုတယ် နဲ့ ညှော်စီလုပ်နေတာ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲကာစ နဲ့ ချိတ်ပြောနေတာ ။
တကယ်လက်တွေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံက မွစ်ဆလင်မ်တွေဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးချိတ်ဆက်မှုရှိဖို့ဝေးစ ဒေသတွင်း မလေးရှားနဲ့တောင် အချိတ်အဆက်မရှိကြ ။ အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာ ဘယ်အချိန်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပီး ဘယ်ပါတီတွေဝင်ပြိုင်မလဲဆိုတာတောင် မသိကြပါ / စိတ်ဝင်စားဖို့တောင်အာရုံမရှိကြပါ ။ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်း အချိတ်အဆက်မရှိကြပါ ။ ဥပဒေပြင်ပက အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သာတောင်ဝေးသေး ။
လူမျိုးလည်းမတူ ဘာသာစကားလည်းမတူကြပါ ။ သူတို့ဇွတ်ချိတ်ပြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘင်္ဂါလီတောင် ဘာသာစကား မတူပါ ။ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့စကားက ဘင်္ဂါလီစကားထက် ပုဏ္ဍားစကားနဲ့ အများကြီးတူတာပါ ။ ( ဒီလိုပြောလို့ ပုဏ္ဍားတွေကို သွားမမဲပါနဲ့ / မြန်မာပြည်ကတဇောက်ကန်းတွေက မလွယ် )
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အဆက်အစပ်မရှိပဲ ကိုယ့်ဖာသာမြန်မာပြည်မှာပဲ လူအများစုနဲ့အတူတူ ဖာသိဖာသာနေလာတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေကို ၂၀၁၁ ကတည်းက အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးတွေနဲ့ ဇွတ်ချိတ်ပြနေခဲ့တဲ့ ဒီလူက သိန်းစိန်အစိုးရရဲ့အကြံပေးတဲ့ ။ သိန်းစိန်အစိုးရ ဘာတွေကြံစည်နေသလဲ မြင်တဲ့သူတွေမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
ဆက်တိုက်ထပ်ဖြစ်လာတာတွေကတော့ မွစ်ဆလင်မ်မုန်းတီးရေးဝါဒဖြန့်ချက်တွေ , အထိကရုဏ်းတွေနဲ့ ဒုချိရာတန်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုလို ရာဇဝတ်မှုတွေပါပဲ ။ genocide မူလပထမစီမံကိန်းရဲ့ လက်သည်တွေထဲမှာ ဒီလူလည်းပါတယ် ။
မွစ်ဆလင်မ်မုန်းတီးရေးသုတေသနစာတမ်းတွေကိုလည်း အောက်ခြေတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိ လိုက်ဖတ်ပြတယ် ။ ဒါဟာ သိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ စလုပ်တာ ။ စာတမ်းဖတ်ပေးသူတွေကတော့ ဒီဘိုးတော်နဲ့ သူတို့ဌာနကလူတွေပါပဲ ။
မွစ်ဆလင်မ်မုန်းတီးရေးကို အခြေခံပီး မဟာဗုဒ္ဓဘာသာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအခြေပြုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတည်ဆောက်ပီး ရွေးကောက်ပွဲအဆက်ဆက်အနိုင်ယူဖို့စီမံကြပေမဲ့ သူတို့တွက်သလိုတွေဖြစ်မလာပဲ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ၂၀၁၁ တုန်းက အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေလို ပြည်တွင်းစစ်တခုနဲ့ စကြုံလာရပါတယ် ။
တချိန်တည်းမှာပဲ အစ္စလာမ်းမစ်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တွေလို့ သူပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ရေးခဲ့တဲ့ တာလီဘန်တွေက ဂျီနီဗာမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဆွေးနွေးပီး ပြေလည်နေချိန်မှာ ဦးကိုကိုလှိုင်တယောက်ကတော့ genocide လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတရားခံတယောက်အနေနဲ့ အမှုရင်ဆိုင်ဖို့ နယ်သာလန် သဟိဂ်ကို ရောက်နေရပါပီ ။
( ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာက ကျနော်တာလီဘန်အားပေးသူမဟုတ် / ပုရ်ှတွန်လူမျိုးကြီးဝါဒအခြေခံတဲ့ တာလီဘန်တွေဟာ အစ္စလာမ်ကို ကိုယ်စားပြုသူတွေလည်းမဟုတ်ပါ / တဇောက်ကန်းလုပ်တတ်တဲ့ တာလီဘန်တွေရဲ့ ပုရ်ှတွန်ဥပဒေတွေကိုလည်း အစ္စလာ့မ်ဥပဒေတွေပါလို့ လက်မခံပါ )
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ တာလီဘန်တွေက မြန်မာစစ်အုပ်စုထက်တောင် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ လူရာဝင်နေတာတော့အမှန်ပါ ။ ရုရှားကမကထပြုတဲ့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးပွဲလည်း တာလီဘန်တွေ တက်ကြတယ် ။ တန်းတူရည်တူ ဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်ဗျာ ။
မဟုတ်မဟပ်ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေနဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေကိုချနင်းရင်း နိုင်ငံရေးအာဏာတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတော့ ၁၀ စုနှစ်တစုစာပဲ ခံလိုက်ပီး အပျက်ပျက်နဲ့ ဂျောက်ကျနေပါရောလား !
ဦးကိုကိုလှိုင်တို့လို တရားခံတွေ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာ ကိုယ်သိကြပေါ့ ။
Crd# Dr Kyawhlaoo
February 19, 2022 at 1:40 pm | Reply
အဲ့လိုဗရမ်းဗတာစာအုပ်မျိုးရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အခု စစ်အစိုးရလက်ထက် ဝန်ကြီးတက်လုပ်နေတဲ့ ဦးကိုကိုလှိုင်ဆိုတဲ့ ဘိုးတော်ပဲ ..He wrote Inn Nya Myinnya book or Bible of BSPP or Burma Socialist Programme Party. So he was appointed the Head Master of Socialist School. By the way he was the notorious PORN WRITER of “Pari Mhar_Thaung Tin Khae Sin Ka”.
March 24, 2022 at 12:41 pm | Reply
ဒါက ရိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာ နောက်ဆုံးရေးတဲ့ပို့စ်ပါ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ရိုကိစ္စ နောက်ထပ် မရေးတော့ဘူး။
အာဏာမသိမ်းခင်က သန်းရွှေလက်ထက်ကနေ ဒေါ်စုအစိုးရ လက်ထက်အထိ အခြေအနေကို အရင်ပြောပြမယ်။ ရိုတွေကို ခဏထား။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ခဏထားလိုက်ဦး။ သွေးနှော (သူတို့အခေါ်အဝေါ်- တကယ်က သွေးမှာ လေးမျိုးပဲရှိတာ) ….. မွတ်စလင်မဟုတ်တော့တဲ့ သွေးနှောတွေတောင် အဘိုးအဘွားလေးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်နေရင် မှတ်ပုံတင် ပန်းရောင်ကတ် မရတော့တာတွေရှိတယ်။ (ပိုက်ဆံနင့်နေအောင်ပေးနိုင်လို့ သိန်းရာချီပေးနိုင်လို့ ပန်းရောင်ကတ် ရသူတွေကတော့ ခြွင်းချက်)။ မှတ်ပုံတင်ပါ မရနိုင်သေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ မွတ်စလင် ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးပေါ့။ မှတ်ပုံတင်ရရင်လည်း လူမျိုးနေရာမှာ …. ဒီကလူအများစု တအားမုန်းတဲ့ စကားလုံး “ဘင်္ဂါလီ” လို့ ဖြည့်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီမှာ အဲဒီလူတွေပဲ “ဘင်္ဂါလီ” ဆိုတာနဲ့ ကျူးကျော်ဆိုပြီး တန်းမြင်ကြတာ။ ခိုးဝင်ဆိုပြီး တန်းမြင်ကြတာ။ အဲဒီတော့ (ဒီကလူတွေအခေါ်အဝေါ်) ပြည်မဆိုတဲ့နေရာမှာ နေလာတဲ့ မွတ်စလင် သို့မဟုတ် တခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား သွေးနှောတစ်ယောက်က….. အခန့်မသင့်ရင် တချိန်မှာ အလိုလို “ခိုးဝင်” ဖြစ်သွားမှာပါ။ အဲလို ဒီမှာမွေးဖွားမှန်း ထင်ရှားတဲ့သူတွေကိုတောင် ထင်သလို ဖိနှိပ်နေသေးတာ။ ဟိုးကတည်းက ဦးနေဝင်းခေတ်က ကတ်တွေ ပြန်သိမ်းထားခံရလို့ အထောက်အထားမဲ့သူတွေ ဆိုရင်လည်း ဘယ်လောက်ထိ ဖိနှိပ်ခံရမလဲဆိုတာက သာမန်တွေးတတ်ရင်ကို ရပါတယ်။ မဘသ အရမ်းအားအကောင်းဆုံး ဦးသိန်းစိန်တက်ကာစ အချိန်ကဆို …. တောင်ကြီးက မွတ်စလင်တချို့ သူ့ဘာသာသူ မင်္ဂလာဆောင်သွားကြတာကို အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ထောင်ချတာ အကြမ်းဖက်မှုမဟုတ်မှန်း ထင်ရှားတော့ကျ လွှတ်မပေးတော့ဘဲ လဝက အမှုနဲ့ ထောင်ပြောင်းချတယ်။ သူတို့အမှုကို လိုက်ပေးရဲတဲ့သူ ရှားတယ်။ လိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဗမာရှေ့နေတွေကို မဘသတွေက သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့အကြောင်း သတင်း တခုတလေမှာ ဖတ်ရတယ်။ အဲဒါမျိုး သတင်းတွေကိုလည်း သိပ်မရေးကြဘူး။ သတင်းတိုက်တွေကို မီးလာရှို့မယ်လို့ တခါတလေ ခြိမ်းခြောက်ခံရတာတွေ ရှိလို့။ သူတို့တွေရဲ့ ဒုက္ခကိုက ဒီတိုင်းပေါ့ပေါ့လေး ပြောလိုက်ရင်တော့ ရပါတယ်။ မှတ်ပုံတင် လုပ်ရတာ လူတိုင်းအတွက် ခက်ပါတယ်တို့၊ လူတိုင်းဖိနှိပ်ခံနေရတာပါတို့။ ဒါပေမဲ့ ခက်ခဲမှု ဒီကရီ မတူခဲ့ဘူး။ ဖိနှိပ်မှု ဒီဂရီမတူခဲ့ဘူး၊ အန္တရာယ်ဒီကရီ မတူခဲ့ဘူး။ ဒါက ပြည်မဆိုတဲ့နေရာမှာ အထောက်အထားရှိခဲ့သူတွေတောင် ကြုံရတဲ့ ကိစ္စ။ ဟိုးနယ်စပ်က သူတွေဆို ဘယ်လောက်ဖိနှိပ်ခံရမလဲဆိုတော့ ပြေးကြည့်စရာမလိုဘဲ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။
အဲဒီ သိန်းစိန်မတက်ခင် ခေတ်နဲ့ သိန်းစိန်တက်ပြီးစခေတ် မဘသ အားအကောင်းဆုံးအချိန်မှာ…. ရိုဟင်ဂျာတွေ သူတို့ဘာသာသူတို့ ပြက္ခဒိန်ထုတ်တာနဲ့ အဖမ်းခံရ ထောင်ကျရတယ်။ ပြက္ခဒိန်တိုက်ပါ ထောင်ချခံရတာ ထင်တယ်။ အဲလောက်ထိ ဖိနှိပ်တာနော်။
စာနာသမှုနဲ့ စာရေးတဲ့သူတွေဆိုလည်း death threat တွေ ရတာပါ။ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ အများစုမှာဆို သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်တွေ၊ တိုင်း၇◌င်းသား ဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်တွေဆိုတာထက်…….သူတို့ကို ကရုဏာသက်သင့်တဲ့အကြောင်း၊ လူသားချင်း စာနာသင့်တဲ့အကြောင်းတွေပဲ များတာပါ။ ဟိုအကြောင်းအရာတွေကို မရေးတတ်လို့တော့ မဟုတ်။ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး အရှည်ကြီး လိုက်မငြင်းချင်တော့လို့။ တစ်ဘက်ကို မုန်းတီးရေး၊ လက်စားချေရေးတွေလည်း ဘာဆို ဘာမှ မပါ။ ကျူးလွန်သူတွေဟာ Buddhist တွေ၊ ဗမာတွေလို့လည်း ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ တခါမှ တံဆိပ်မကပ်ဘူး။ အစွန်းရောက််တချို့လို့ပဲ သုံးနှုန်းတာ။ အဲဒါတောင် death threat တွေရတယ်။ ကိုယ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ မနေသူမို့ အဲလိုတွေရေးရတာ တော်သေးတယ်။
ပြည်မလို့ခေါ်ကြတဲ့ မိတ္ထီလာက လူတွေကိုတောင် ထင်သလို သတ်ဖြတ်၊ သတ်ဖြတ်သူတွေကိုလည်း အရေးမယူ၊ လုံလောက်တဲ့ တရားစီရင်မှုမရှိတဲ့အပြင်၊ နှစ်သိမ့်မှုတောင် သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲလို သူတို့ လုပ်ရပိုခက်တဲ့ နေရာမှာ ဟိုးအစဥ◌်အဆက်ကနေလာပြီး document ရှိခဲ့တဲ့သူတွေတောင် ထင်သလို သတ်ပြီး ….နောက်ပိုင်းလည်း ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ခွင့်မပေးပဲ လုပ်တာမျိုးတွေ။ ဒါဆို ဟိုးလုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ရမယ့် နယ်စွန်နယ်ဖျားမှာ ဘယ်လောက်များ ဖိနှိပ်မလဲဆိုတာ သာမန်တွေးကြည့်ရင်ကို သိသာပါတယ်။ နောက်ဘဝသာရှိရင် နောက်ဘဝမှာ ခင်ဗျား ရိုဟင်ဂျာကလေးလေး အဖြစ် ပြန်ဝင်စားချင်လားဆို ဘယ်သူမှ ဝင်စားချင်မှာမဟုတ်။ အသားကုန် ဖိနှိပ်ခံရမှာမို့။ ဒါပေမဲ့ အမုန်းနဲ့ မှိုင်းတိုက်ထားတော့ကျ သူတို့ကို ဖိနှိပ်ခံရသူတွေအဖြစ် မြင်မပေးနိုင်ကြတာ။ ရိုတွေ အကုန်မှန်တယ်လို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ အစွန်းရောက်သူတွေ ရှိကောင်းရှိမယ်၊ မှားတာတွေ ရှိကောင်းရှိမယ်။ အယူအဆ အစွန်းရောက်လို့ အကုန်သတ်ပစ်သင့်တယ်လို့ ဖက်ဆစ်ဆန်သူတွေက ပြောရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဗမာတွေနဲ့ တခြားလူမျိုးတွေပါ တော်တော်များများက လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အစုလိုက် သတ်ခံရတာကိုတောင် သတ်ခံရသူတွေကိုထပ်မုန်းတီး လှောင်ပြောင်တဲ့အထိကို အစွန်းရောက်ခဲ့ကြတာလေ။ ကိုယ်အစွန်းတအားရောက်တာကိုသာ ကိုယ်မမြင်ကြတာပါ။
အဲဒီမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ မျှတတယ်တွေ၊ ဓမ္မတွေ ကြွေးကြော်နေကြပေမဲ့ (လူတိုင်းလည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမမျှတနိုင်ကြတာကို နားလည်ပေမယ့်) အစွန်းရောက်မှု လယ်ဗယ်က တော်တော်ဆိုးတယ်။ မသိလို့လို့ ပြောပြန်ရင်လည်း သိအောင်ရေးသူတွေကို death threat ပို့တဲ့အဆင့်အထိ ခြိမ်းခြောက်ကြတာပါ။ တချို့တွေကိုဆို သစ္စာဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ် ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ တင်ပြီး အလုပ်တွေဖြုတ်ခံရအောင် ခြိမ်းခြောက််တာမျိုးအထိ ရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ၂၀၀၉ လောက်ကနေ ၂၀၁၃ လောက်ထိ ဝန်းကျင်ဆို တိုးတက်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ရဲ့ ခေတ် အားကောင်းချိန် ရောက်မလာသေးချိန်မို့…..အဲဒီအချိန်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့သူ နည်း်နည်းလေးဆို လှိမ့်ပိန့်နေအောင် ဝိုင်းဆဲခံ၊ ဝိုင်းမုန်းတီးခံရတာပါ။ တခါတခါဆို သူတို့က မရှက်ရဘဲ ကိုယ်ကဘဲ အများကြားမှာ မျက်နှာငယ်နေ၇တာပါ။ ဘွဲ့ယူတဲ့အချိန်ကို မှတ်မိတယ်။ မင်း….ရိုတွေအကြောင်း ဘာလို့ရေးနေတာလဲတဲ့။
ကိုယ်တွေအပါအဝင် အများစုရေးတာက ….. လူကို လူလိုဆက်ဆံရေးလောက်ပါပဲ။ သမိုင်းကြောင်းဘာညာ ရေးသူတွေ ရှိပေမဲ့ ကိုယ်ဆို လူသားချင်းစာနာမှုအကြောင်းလောက်ပဲ အများဆုံးရေးတယ်။ ရေးတဲ့အထဲမှာလည်း တခြားတစ်ဘက်အပေါ်မုန်းတီးမှု မပါအောင် သတိထားပြီး အမြဲရေးခဲ့တာ။ အဲဒါကိုတောင် အဲခေတ်က လက်မခံကြပါဘူး။ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုရှိတယ်။ တစ်ဘက်မှာ အဲ့ဒီကာလတင် မကဘူး၊ အာဏာမသိမ်းခင် အချိန်အထိကို အစုလိုက် သတ်ဖြတ်ဖို့ စွပေးကြတဲ့ အရေးအသားမျိုးတွေ၊ ပိုးမွှားတွေလို သုတ်သင်ပစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ ့အရေးအသားမျိုးတွေကျ ဒီဘက်က ပညာတတ် ဆိုတဲ့သူတွေပါ ရေးကြတာနော်။ အဲလိုရေးလို့လည်း သူတို့ကို ဒုက္ခပေးဖို့ မကြံစည်ဖူးဘူး။ ကြံစည်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး သူတို့က အများစု။
ခုချိန်မှာလည်း များသောအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်က up တွေ ဘာတွေတောင် ပြန်လုပ်လေ့မရှိသူပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တွေ တခါတလေ ပြန်ဖော်ရင်တောင် ကိုယ့်အပြစ်ကြီး ဖြစ်နေရော။ ကိုယ် ပြန်လှောင်ပြောင်တယ် သရော်တယ်ဆိုတာက သူတို့ကို ခြိမ်း‌ေ်ခြာက်တာ၊ ဒုက္ခပေးတာတောင် မဟုတ်။ သာမန်အဆင့်လေးပဲ။ သူတို့ကကျ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သူတွေ၊ အစုလိုက် သတ်ဖို့ မြှောက်ပေးသူတွေ။ တောင်းပန်သူ ဆိုတာလည်း တအားရှားတယ်။ တောင်းပန်သူရှိရင်တောင် တခြားမှာ ခိုလှုံရမှာမို့ ဝဋ်ကြေတန်းကြေသမားတွေ များတယ်။ ဆက်ပြီး ရပ်တည်ပေးမှုလည်း မတွေ့ရဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရေးတာကို အလိမ်အညာမပါဘဲ ပြန်ဖော်ပြီး တခါတလေ သရော်တာလောက်က …. သတ်ဖြတ်ဖို့ မြှောက်ပေးတာနဲ့ ယှဥ◌်ရင် ပမွှားပါ။ အဲဒါကို သတ်ဖြတ်ဖို့ မြှောက်ပေးသူတွေရဲ အပြစ်မဟုတ်တော့ဘဲ တခါတလေ ပြန်ဖော်သူတွေရဲ့ အပြစ်ဖြစ််တာကတော့ သဘာဝတော့ မကျဘူး။
ကိုယ့်ဆီက လူတွေက အဲလိုအရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ သန်းရွှေခေတ်မှာလည်း ကျန်တဲ့ကိစ္စသာ ဆန့်ကျင်မယ်၊ အများစုက သန်းရွှေနဲ့ အမြင်တူခဲ့တာ။ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ၊ အဲလို မုန်းတီးရေး ကိစ္စတွေမှာ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမြင်တူခဲ့သူ များတယ်။ နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း လျော့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်အထိ အဲလိုအမြင်တွေ ပိုများပါတယ်။
ကာတွန်းတွေ အဲလိုဆွဲမိတာက မသိလို့လို့ ဆင်ခြေပေးကြတယ်။ မသိရင်လည်း ဒီလောက် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စကို follower အများကြီးရှိသူတွေက ဘာလို့ကာတွန်းဆွဲခဲ့လဲ။ မသိရင် မသိသလို နေပါ့လား။ ပြီးတော့ မသိလို့ ဖြစ်တာဆို သိအောင်ရေးတဲ့သတင်းဌာနတွေကို ဘာလို့ one star ပေးပြီး ဆဲခဲ့ကြလည်း။ မသိတာလား၊ မသိချင်တာလား။ (အင်တာနက် မသုံးနိုင်သူတွေ မသိတာကို မဆိုလို) ခုကျမှ မသိလို့ ကာတွန်းဆွဲမိတာ ဆိုရင်တော့ မရဘူး။ ဥပမာ နိုင်ငံတကာမှာ ဘောလုံးသမားတွေ သာမန် racist ဖြစ်တဲ့ စကားလုံး (အစုလိုက် သတ်ဖို့ မြှောက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်)ကို ဆန္ဒအလျောက် ပြောမိရင်တောင် ပွဲပယ်ခံရ အရေးယူခံရပါတယ်။ အထပ်ထပ်တောင်းပန်ရင်တောင်မှ မရပါဘူး။ အခုက အဲလို သတ်ဖြတ်ရေး မြှောက်ပေးသူတွေကို အရေးယူနေလို့လားဗျာ။ တခါတလေ စကားလုံးလေးတွေနဲ့ သရော်တာတော့ ရှိချင်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါလည်း အမြဲမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လုံးဆို ဒီကာလလေးပဲ လုပ်တာ။ 😃
မြန်မာတွေ… ခု ရိုတွေလိုပဲ သတ်ခံနေရ၊ အိမ်မီးရှို့ခံနေရတယ်။ အဲဒါကို သတ်တာကောင်းတယ်တို့၊ မိကျောင်းမျက်ရည်တွေတို့ ပြောရင် ပြောသူကို ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ။ ပက်ပက်စက်စက် အော့နှလုံးနာကြမှာ မဟုတ်လား။ အခုက…. အရင်က လူနည်းစုအရေး ရေးလို့ သတ်ခံရမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရသူတွေက သာမန်လေး ပြန်ပြီး သရော်ကြတာမျိုးပါ။ အဲဒါလေးမှ နားလည်မပေးရင်လည်း ပြောစရာစကားတွေ၊ ဆက်သရော်စရာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ တကယ်စစ်မှန်စွာ တောင်းပန်တာဆိုရင် မင်္ဂလာပါ။ အဲလိုလူတွေကလည်း သရော်ရုံလောက်လေးနဲ့ သူ့အလှည့်ကျမှ ပြန်စိတ်နာစရာ တိုက်ခိုက်စရာ မလိုဘူးထင်တယ်။ အခြေအနေအရ မဟုတ်ဘဲ အဲလိုသာ တကယ်စာနာသွားနိုင််တာဆိုရင် နှစ်နှစ်ကာကာမှန်းသိသွားရင် ဘယ်သူကလည်း ဆက်သရော်နေမှာလဲ။
အများဆုံးရေးဖြစ်တာက ဘာဖြစ်ခွင့်၊ ညာဖြစ်ခွင့်တွေတောင် မပါသေးဘူး။ ဒါကို တချို့က ပြောသေးတယ်။ ရခိုင်မှာ သွားနေကြည့်တဲ့။ဪ… နာဇီတွေကို ရှုတ်ချဖို့အတွက် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ဖူးမှ ရမှာလား။
March 25, 2022 at 4:59 am | Reply
လဝကတွေကအစ္စလာမ်တွေ ဟိန္ဒူတွေကိုငွေမတရားတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကိုလူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာတင်ပြတော့ ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကို မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးဖို့ ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်နေတယ်ပြောတယ်
ကဲဒါဆိုမြန်မာ့လူဝင်မှုဥပဒေကိအြဓိကကိုင်တွင်နေတဲ့ လဝကရုံးရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံကို လေ့လာကြည့်တော့ ဒီလိုအဖြေထွက်တယ်
“”အစ္စလာမ်သာသနာ ဟိန္ဒူသာသနာတွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲကပျောက်သွားအောင်genocideလုပ်နေတဲ့အမှုကအဓိကပြသနာပဲ “”
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ရင် (တိုင်းရင်းသားမဟုတ်လို့) နိုင်ငံသားမပေးဘူး
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ရင် (တိုင်းရင်းသားမဟုတ်လို့) သွေးနှောဖြစ်ရမယ်
မြန်မာ မတရားဥပဒေ လေနဲ့ဝမ်းမကွဲတဲ့နိုင်ငံသားဥပဒေ
March 25, 2022 at 5:00 am | Reply
ဘလင်ကန်ပြောသော genocidal intent အထောက်အထား၇ချက်
၁။ ထွက်ပြေးဘက်ပြောင်းလာသောစစ်သားများ၏ပြောဆိုချက်အရ အကုန်သတ် အကုန်ရှို့ အကုန်ကျင့်အမိန့်ပေးခြင်း
၃။ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် တပ်မ၃၃မှ ဒုဗိုလ်တင်ထားသောပို့စ်တွင် ဘန်ဂါလီဆိုအကုန်သတ်မယ်ဟုပါရှိပြီး ၎င်း၏တပ်စိတ်သည်အမှန်တကယ်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း
၄။ကျူးလွန်မှုများဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာချုပ်က မပြီးသေးသောဘန်ဂါလီပြသနာကို အစိုးရကဖြေရှင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခြင်း
၅။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီးကျူးလွန်ခြင်း၊ ဥပမာ မောင်နုကျေးရွာတွင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏မီးဖိုချောင်သုံးဓါးနှင့်ဓါးမများကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၊ကာဖျူးထုတ်ခြင်း၊ ရိုဟင်ဂျာအိမ်များနှင့်ဗလီရှေ့တွင် ရှံနီစ အမှတ်အသားလုပ်ထားခြင်း
March 25, 2022 at 5:15 am | Reply
Favorites · Ma1ym S22i,0ohau so2re0mm21d ·
ဘင်္ဂလီခိုးဝင်များကိစ္စ ဖိဖိစီးစီးကိုင်တွယ်၍ ထိရောက်စွာ အရေးယူပြီ
နိုင်ကတ်မရှိသူများအား ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့် စိစစ်ရေးကတ် ပြုလုပ်ပေးမည်
မန္တလေး ဧပြီ ၃၀
အမျိုးသားရေး အင်အားစုများ သိချင်နေကြတဲ့ ဘင်္ဂလီ ခိုးဝင် ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်လို့ မန်းတိုင်း တစက ကောင်စီဝင် လဝက တိုင်းဦးစီးမှူးက “ယခင် NLD အစိုးရ လက်ထက်က အထက်မှ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီများကို ဖမ်းမိပါက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရကြောင်း၊ ထမင်းကျွေးကာ သူတို့ဒေသအထိ ပြန်ပို့ပေးရကြောင်း၊ လဝကဥပဒေကို ကျော်လွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါကြောင်း” ဧပြီ ၂၉ရက် က ပုသိမ်ကြီးမြို့တော်ခန်းမမှာ
ပြုလုပ်တဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ရှင်းပြပါတယ်။
ထို့အပြင် တစက ကောင်စီဝင် လဝက တိုင်းဦးစီးမှူးက “ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နစက ကောင်စီ လက်ထက်မှာတော့ ထိထိရောက်ရောက် ဖိဖိစီးစီး ကိုင်တွယ်နေပါကြောင်း။ ဖမ်းဆီးရမိမှုများလည်း ရှိပါကြောင်း။ တည်ဆဲဥပဒေများအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း။ ဒေသခံများအနေဖြင့် မိမိရပ်ရွာဒေသမှာ ခိုးဝင်များ ရောက်ရှိနေပါက ရပ်ကျေး သို့မဟုတ် မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် သတင်းပေးပို့ စေလိုပါကြောင်း။ အလျင်အမြန်စိစစ်၍ ဥပဒေအရ ဆက်လက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း”အကျယ်တဝံ့ ရှင်းပြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံသားအားလုံး အသိအမှတ်ပြုကတ် ရရှိရေးအတွက်
နိုင်ကတ် မရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို #ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (သို့မဟုတ်) သင့်လျော်ရာ ကတ်တစ်မျိုးမျိုး ထုတ်ပေးမယ်လို့ လဝက ထံမှ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း စီမံချက်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်
အလျင်အမြန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
March 26, 2022 at 6:00 am | Reply
လူမမယ်သမီးလေးများနဲ့ အိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီးလက်လွတ်ခွက်ချွတ်အသက်‌ ဘေး
လွတ်‌ အောင်ပြေးခဲ့ရပါတယ် ။
လူရမ်းကား တွေဝင်လာလို့မိမိအိမ်အ ပေါ်ထပ်‌ ရေစင်တိုင်ကီထဲပုန်း နေတဲ့အစ္စလာမ်လူငယ်
🔸ဘာသာရေးဆရာတစ်ဦးကိုလက်မရွံ့ဒလံ တွေလက်ချက်နဲ့ရက်ရက်စက်စက်တကိုယ်လုံးဒါးဒါဏ်ရာတွေနဲ့ဝေဒနာခံစားပြီးများမကြာမီကွယ်လွန်ခဲ့တယ် ။
ဆိုင်သော့ဖျက်မ ရမြောက်လက်တံခါးပိတ်ဂျိတ်တွေဖျက်မရတဲ့အခါ အဲဒီမော်တာတွေသုံးပြီး
တောင်င်ငူက‌‌ မောင်နှမ‌ တွေကျေးဇူးကို
အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါရ စေလို့သာ။
March 27, 2022 at 12:10 pm | Reply
(State-sponsored discrimination )
ထိုင်းကလူတွေကလည်း ထိုင်းတွေက မြန်မာတွေကို နှိမ်တယ်မလာနဲ့လို့ ပြောကြတာ ရှိတယ်။
မလေးကလူတွေ ဒူဘိုင်းကလူတွေ (မဘသတွေကလည်း) အဲ့နိုင်ငံတွေက Kaလား နိုင်ငံ မလာနဲ့လို့ ပြောကြတာ ရှိတယ်။
သူတို့ပြောတဲ့ အချက်အလက် တချို့တလေ မှန်ကောင်းမှန်မှာပါ။
မြန်မာတွေ ထိုင်းမှာ အနှိမ်ခံရတာ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက လူမျိုးရေးမုန်းတိးမှုထက် document မရှိလို့ ခံရတာတွေလည်း ပါတယ်။ (အဲလို ခံရတာလည်း ကမ္ဘာကြီးမှာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး)။ အဲလို document မရှိတာတောင် ထိုင်းအစိုးရက သူတို့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်ရော၊ အဲဒီအကျိုးစီးပွားကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အလုပ်သမားထုအတွက် တစုံတရာ ပြန်ကြည့်ပေးတာတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းမှာ (တချို့လူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ အနိမ့်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့) အိမ်အကူ လို အလုပ်မျိုးလာလုပ်ရင်တောင် ပိုလျှံရုံမက မြန်မာက မိသားစုကို ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ မိသားစုတွေ အများကြီးပဲ။ မြန်မာမှာက ဒေါက်တာဘွဲ့ရ CDM တွေတောင် ငတ်နေကြတာ။ ဂုဏ်သိက္ခာအရလည်း လူလို မနေရဘူး။
ထားပါတော့။ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု တွေမှာလည်း နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးကို ရောချလို့ မရ။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မြန်မာတွေအပေါ် နှိမ်တာ၊ discrimination လုပ်တာ ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာမှာ ဖြစ််တာမျိုးက သာမန် discrimination မဟုတ်။ Institutional discrimination။ တနည်းအားဖြင့် state-sponsored discrimination လည်းဟုတ်တယ်။ အဲဒါကလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေကို လုပ်တာမဟုတ်။ နိုင်ငံထဲမှာတင် အစဥ◌်အဆက် နေလာခဲ့သူကို သွေးနှောလို့ မှတ်ပုံတင်လုပ်မပေးချင်တာမျိုးဟာ state-sponsored discrimination မို့ အစိုးရကိုယ်တိုင်ကပါ ပညာရှိနည်းနဲ့ နှိပ်စက်တာမျိုးပါ။ လူအချင်းချင်း သွေးကြွပြီး လုပ်တဲ့ discrimination မျိုးထက် state-sponsored discrimination မျိုးက မသိမသာ ဒါပေမဲ့ စနစ်တကျ ဖိနှိပ်ထားတာမို့၊ system တစ်ခုတည်ထောင်ပြီး လုပ်တာမို့ ရေရှည်မှာ ပိုပြီး ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ အစဥ◌်အဆက်နေလာမိသူတွေက တခြားပြေစရာမြေမရှိချိန်ဆိုရင် နိုင်ငံမဲ့ရုံပါပဲ။ မကျေနပ်ရင် ထွက်သွားကြလို့ ပြောရတာလွယ်ပေမဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အခုတော့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာ…… လူတွေ သွေးနှောနှော မနှောနှော ….အဲဒါတွေကို မကြည့်တော့ဘဲ သူ့ကိုထောက်ခံ မခံဘဲ ကြည့်တော့တာ။ သူ့ကို မထောက်ခံတဲ့သူတွေ CDM တွေဆို ပတ်စ်ပို့မပေးတော့ဘူး။ ထွက်ပြေးချင်တောင် ပြေးလို့မရတဲ့ ဘဝ‌ေတွေ။ အလုပ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အရည်အချင်းရှိရင်တောင် အလုပ်မရအောင်၊ သူ့ကို ဆန့်ကျင်သူတွေ ငတ်အောင် လုပ်နေတာ။ အဲလိုဖြစ်အောင် သူတို့က system တခု တဖြည်းဖြည်းချင်း develop လုပ်နေတာပါ။ သိပ်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ တချို့တွေ တောင့်ခံနိုင်မှာမဟုတ်။
ဒီတေ်ာ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲခက်ခဲ ….. မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ယှဥ◌်ရင်တော့ နတ်ဘုံနတ်နန်းလို ဖြစ်နေတော့ ….. တချို့တွေ သေချင်သေပါစေ ကွန်တိန်နာထဲကနေ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားရောက်ရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကို ရွေးကြတာပါ။ အာဖဂန်က လူတွေ လေယာဥ◌်ဘီးဖက်ပြီး လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဟိုရောက်ရင်ရောက်၊ မရောက်ရင်လည်း သေတာကမှ ကောင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
စင်ကာပူမှာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်း၊ ထိုင်းမှာဘယ်လောက် နှိမ်နှိမ်၊ အမေရိကားမှာ ဘယ်လောက်ရုန်းရရု်နးရ ယေဘုယျခြုံကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံထက်တော့ အများကြီး ကောင်းနေသေးလို့ပါ။
ပြီးတော့ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ လူပြိန်းတချို့ သို့မဟုတ် racist တချို့က နိုင်ငံခြားသားတွေကို discrimination လုပ်တာကို မြန်မာလို နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံသားအချင်းချင်းတောင် အစိုးရကိုယ်တိုင် state-sponsored discrimination လုပ်တာနဲ့ ထပ်တူပြုလို့တော့ မရပါဘူး။
ထပ်ဖြည့်ချက်။ ကမ္ဘာမှာ Discrimination ကင်းမဲ့တဲ့နိုင်ငံရယ်လို့ မရှိပေမဲ့ မြန်မာလိုနိုင်ငံတွေမှာက (၁) အစိုးရတွေကိုယ်တိုင် (၂) နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူတွေကိုတောင် …. state-sponsored discrimination လုပ်တာမျိုးပါ။
April 19, 2022 at 1:47 pm | Reply
(Ko) Kaung Kin Ko
အရင်ခေတ်ကတည်းက ဒါမျိုးတွေ ရှိပေမဲ့ မွတ်စလင်တွေ၊ သွေးနှောဆိုသူတွေ (သူတို့အခေါ်အဝေါ်) ခွဲခြားဆက်ခံခံရရင် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရကြောင်း ပြောရင်တောင် မကြိုက်ကြဘူး။ လူလူချင်း ရိုးရိုး discrimination ကို ခဏထား၊ နိုင်ငံတိုင်း မကင်းလို့။ အာဏာပိုင်တွေကပါ မူဝါဒကြီးနဲ့ ခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရလို့ ခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရမှုကို ပြောရင်တောင် ပြောတဲ့သူတွေကပဲ ဆိုးသွမ်းနေသလိုလို၊ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်သလိုလို၊ (လူတွေအခေါ်) မျိုးမစစ်သူအချင်းချင်း ဘရားသားဟုနေသလိုလိုပါ ထပ်စွပ်စွဲကြတာ။ ဖြေရှင်းပေးဖို့ တန်းတူညီမျှ တောင်းဆိုပေးဖို့ နေနေသာသာ အဲလိုပါ ပြန်စွပ်စွဲကြတာ။ ခွဲခြားတာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ နေနေသာသာ ခွဲခြားခံရကြောင်း ပြောရင်တောင် နှာခေါင်းရှုံ့ကြတာ။ ပြီးရင် တအားချမ်းသာနေတဲ့ Ka လားတွေ၊ တအားချမ်းသာနေတဲ့ တရုတ်တွေကို လက်ညှိုးထိုးပြကြဦးမယ်။ ငွေလမ်းက လူတိုင်းခင်းနိုင်တာမဟုတ်။ ငွေလမ်းခင်းနိုင်တဲ့ လူအုပ်စုတချို့ကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး…..ခွဲခြားခံရလို့ ခွဲခြားခံရကြောင်း ပြောသူတွေကပဲ မှားနေသလိုလိုတွေ ရှီခဲ့တယ်။
မှတ်ပုံတင်လုပ်ရင် ရစ်ခံရတာချင်း အတူတူဆိုရင်တောင် မှတ်ပုံတင်လုပ်ရင်တောင် ရပ်ကွက်အဆင့် မြို့နယ်အဆင့်ထိ မပြီးဘဲ ပြည်နယ်အဆင့်ထိ သွားရတဲ့ သွေးနှောဆိုသူတွေရှိတယ်။ မှတ်ပုံတင် ကိစ္စမျိုးဆို လဝကရုံးမှာကအစ လူမျိုးပျောက်မယ် ဘာညာ စာတမ်းကြီးပေါ်တင် ရေးထားပြီး သွေးနှောတွေဟာ နိုင်ငံကို အန္တရာယ်ပေးမယ့်သူတွေအဖြစ် ပေါ်တင်ပုံဖော်ထားတာကို မခွဲခြားပါဘူး ဇွတ်ပြောကြသေးတာ။ တကယ်ခွဲခြားဖိနှီပ်ခံရလို့ ခွဲခြားခံရကြောင်း ပြောသူတွေကပဲ အစွန်းရောက်သလိုလို ပြောင်းပြန်ပြောကြတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။
May 15, 2022 at 10:20 am | Reply
“သားအမေက kလားကြီးနောက် လိုက်သွားပြီ..”
လူမှန်းသိခါစ အရွယ်မှာပဲ ကြားခဲ့ရဖူးတယ်။
ရွံစရာ ကြောက်စရာ မုန်းတီးစရာကြီးဆိုပြီး
ကျောင်းနေအရွယ် သုံးတန်း လေးတန်း
Kလားလို့ အခေါ်ခံရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ
မုန်းတီးမှု့တွေကိုဖြစ်လာသလို ဘာသာရေး အစွန်း ရောက်တွေဖြစ်လာနိုင်စေတော့တယ်
လွတ်လပ်စွာ လေ့လာခွင့်တွေပေးဖို့ …
အသားအရောင် နဲ့ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကိုကြည့်ပြီး
နိုင်ငံသား လူမျိုးနဲ့ ဘာသာတရားဆိုတာတွေရဲ့
အရွယ်ရောက်ချိန် နဲ့ လူကြီးဖြစ်လာချိန်မှာ
တန်ဖိုးထားတတ်သော နေချင့်စဖွယ်တိုင်းပြည်အဖြစ် ရောက်ရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းပါ…။ ။
Edit..ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ ခမျ🤍🤍🤍